Home Wararka Waa kuma shaqsiga ay Fahad & Farmaajo rabaan in uu qabto...
[XOG] Waa kuma shaqsiga ay Fahad & Farmaajo rabaan in uu qabto NISA?
Warar hoose oo aay heshay MOL ayaa lagu sheegayaa in Farmajo, Fahad iyo Asias Afwerki ka wada hadleen in Abdirasaq Mohamoud loo magacaabo Agaasimaha NISA. Abdirasaq waa Soomaali wuxuna haystaa dhalasho Eritrean xaaskiisuna waa Eritrean. Waa xariiriyaha labada wadan, aadna ugu dhow madaxda sar sare ee Asmara iyo Mogadishu.
Cabdirasaq ayaa ah shaqsiga haya faylka wiilasha lagu la’yahay Eritrea, waana qofka masuulka ka ah dhamaan qaadista iyo tababarka wiilasha ku maqan.
Waxaa su’aalo badan ka imanayaan sababta ay Farmaajo iyo Fahad ugu dhagan yihiin haya’dda NISA iyo Wasaaradda Amniga, taasoo loo badinaayo in aanay gacanta u gelin xogta taal labadaas meelood dad aanan ku jirin xayndaabta Fahad iyo Farmaajo.